PRRS बंगुरमा एउटा भाइरसको कारणले लाग्ने रोग हो जसले मुलत प्रजनन प्रणाली र श्वासप्रश्वास प्रणालीमा असर गर्दछ। यो रोग सबै उमेर समूहको बंगुरमा देखिन्छ। मुख्यतः माउ बंगुरमा र कहिलेकाहीं वीरमा समेत प्रजनन क्षमता ह्रास गराउँछ। त्यस्तैगरी, सानो उमेरको बंगुरमा श्वासप्रश्वास सम्बन्धी समस्या देखा पर्छ। कहिलेकाहीँ यी दुवै समस्या एकसाथ देखा पर्छन्। एउटा सङ्क्रमित बंगुरमा यो रोग ६० दिनभन्दा बढी समयसम्म सक्रिय अवस्थामा रहन सक्छ। रोगी बंगुरको सिँगान, पिसाब, वीर्य, दूध र दिसामा यो भाइरस हुन्छ जसबाट यो रोग एउटा बाट अर्को बंगुरमा सजिलै सर्न सक्छ। वयस्क बंगुरमा मृत्युदर २०%...
परिचय :बाख्राहरुमा सुक्ष्म जीवाणुबाट लाग्ने रोगहरु मध्ये यो एक प्रमुख रोग हो । यो रोग संसार भरी नै पाईन्छ । तर व्यावसायिक रुपमा सघन व्यवस्थापनमा पालीएका बाख्राहरुमा यो रोग चरनमा पालीएका बाख्राहरुमा भन्दा बढी लाग्दछ । यो रोगले बाख्राको स–साना पाठापाठीहरुलाई बढी सताउने गर्दछ । व्यस्क बाख्राहरुमा पनि यो रोग लागेको पाइन्छ तर ३ हप्ता मुनिका पाठापाठीहरुमा यो रोग लाग्दा धेरै जसोले कुनै लक्षण नै नदेखाई मर्ने गर्दछन्। रोगको कारण :बाख्राहरुमा यो रोग एक किसिमको जीवाणुको कारणबाट हुन्छ । यो रोग लगाउने जीवाणु सामान्य अवस्थामा पनि बाख्राहरुको आहारा नलीमा रहन्छन् । यी...
बाख्राको लागि बिषालु घाँस के के हुन्? बिषालु घाँस खाएमा के गर्ने?
पशुलाई विष लाग्ने किसिमको घाँसपात नेपालको तराई भाग देखि उच्च पहाडी भेगसम्म पाईन्छ । पशुहरु हरियो घाँसपात खाँदा कहिलेकाँही विषालु घाँसहरु खान पुग्दछन । र त्यसमा रहेको अपाच्य विषालु पदार्थले जनावरलाई रोगी बनाउछ । केहि उच्च प्रोटिनयुक्त घाँसपात वा बोट बिरुवा खास मात्रामा सेवन गरेमा अतीनै फाईदाजनक हुन्छ । तर धरै मात्रामा खान पुगेमा बिष लाग्ने हुन्छ । बिषालु घाँसपात कसरी खान्छन ? साना पाठापाठीलाई बिष लाग्ने घाँसपात बारे ज्ञान नभएर । नयाँ ठाँउ या चरनमा बाख्रालाई चराउनाले । मिठो घाँससंग बिषालु घाँसपात मिसीएकोले । सुख्खायाममा हरियो रहने विषालु घाँसपात देखि...
छोटो समयमा राम्रो आम्दानी लिन सकिने बट्टाइ पालन कसरी गर्ने ? सम्पूर्ण जानकारी!
नेपालमा हाल मासु र अन्डाको लागि बट्टाइपालन व्यवसाय निजीस्तरमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र निकै लोकप्रिय हुँदै गएको छ । बट्टाइको वैज्ञानिक नाउँ Coturnix japonica हो । नेपालमा बट्टाइपालनको आरम्भ बालकोट, भक्तपुरबाट भएको मानिन्छ । नेपालमा फोहोर, ब्रिटिस रेन्ज, इङलिस ह्जाइट जातका बट्टाइ पालन गरिन्छ । बट्टाइको व्यवस्थापन: वयस्क चराको तौल १२०–३०० ग्राम हुन्छ । यो चरा करिब ४५–६० दिनको उमेरमा वयस्क हुन्छन् । बट्टाइको पोथी भालेभन्दा केहि ठूलो हुन्छ । प्रायः पोथीले ६–७ हप्ताको उमेरमा अन्डा पार्न सुरु गर्दछ । फुल बिहान पख पार्दछ । एउटा पोथीले एक वर्षमा २५०–३०० वटासम्म फुल...
व्याउने गाई भैँसीको हेरचाह कसरी गर्ने त? यी १६ कुरामा ध्यान दिनुहोस्!
गाई भैँसीको व्यवसायको सफलता पशुहरुको हेरचाह एवं व्यवस्थापन पक्षसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित रहने गर्दछ । यो व्यवसायमा धेरै जोखिमहरु छन् र पशुपालन व्यवसायीले निकै सतर्कमा अपनाउनुपर्ने हुन्छ । गाई भैँसीपालक कृषकहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु बुँदागत रुपमा यसरी प्रष्ट्याउन सकिन्छ । १. साधारणतया वाली गएको २८० दिनमा गाई र ३१० दिनमा भैंसी व्याउने गर्दछन् । त्यसैले कृषकहरुले आफ्नो पशु व्याउने सम्भाव्य मिति याद गरी राख्नु पर्छ । २. गाई भैंसी व्याउने सम्भाव्य मिति भन्दा केही दिन अगाडि देखि पशुलाई थोरै समय हल्का हिँडडुल गराउनु राम्रो हुन्छ । यसो गर्नाले गाई भैँसी...